ပန်ဒိုရာ: ကမ္ဘာကျော်အဆိုအမိန့်တွေ မဟုတ်ပေမယ့် - ၁
မပန်ရဲ့ ချစ်သူနဲ့ ထူးဆန်းသော သူငယ်ချင်းပြောတာတွေ ကြိုက်တယ် ။
ကမ္ဘာကျော်အဆိုအမိန့်တွေမဟုတ်ပေမဲ့ - (မမပန် လူချိုး)
တိုက်ဆိုင်ရင် ကြိုက်နိုင်ပါတယ် ဂျစ်ရေ
ဟေ့ရောင် မောင်တက် … နာ့ကို မမ မမနဲ့ အချောင်လာခေါ်မနေနဲ့.. ညီမရှိတယ်ကွ. ဟွန်း.. မင်းတို့ အကြောင်းတွေ မတိရင်ခက်မယ်…
“Everything is negotiable if you have valid reasons”
“ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ၀ယ်ရင် ဈေးမဆစ်ပါနဲ့ မေမေရယ်။。。”မပန်ဒိုရာမောင်လေးနဲ့
အခွန်ကိစ္စကတော့ ထားပါတော့။ ဒီလောက် မှတ်စရာတွေ ထဲမှာ မောင်လေးနဲ့ကိုကို့ကိုပဲ ပြောနေတယ်.. ဟင်းနော်..
အမ.. အမချစ်သူပြောတာ ဖတ်မိတော့.. အမေပြောတဲ့ ..ကိုယ်စိုက်တဲ့ စပါး.. ကိုယ်ပဲရိတ်ရတယ် ဆိုတာလေး သတိရမိတယ် .အမရယ်.. ကိုယ်စိုက်သလောက်ပဲ. ရိတ်ရတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့…
သြော်… ဒါနဲ့ အမ.. အမမောင်လေးက ဘယ်နနှစ်လဲ ဟင်… ဟီး…
အပြောကောင်းတဲ့ လူဟာ အလိမ်ကောင်းတတ်တယ်။ ( မပန် မေမေပြောတာ သိပ်မှန်တာပဲ.. )
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ၀ယ်ရင် ဈေးမဆစ်ပါနဲ့ မေမေရယ်။ သူတို့ခမျာ ကိုယ့်လောက်မရှိလို့ ဒါမျိုး ရောင်းစားနေရတာ။ ကိုယ်က တစ်ကျပ်နှစ်ကျပ်နဲ့ ဘာမှဖြစ်မသွားပါဘူး။ ( ဒီမိုလဲ အဲဒီလိုတွေးဘူးတယ်.. အမေတို့ ဈေးဆစ်ရင် အနားက ထွက်ပြေးနေတာ..မျက်နှာပူလို့ )
သတ္တိမရှိတဲ့လူမှာ အချစ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ အေး.. သစ္စာဆိုတာလည်း မရှိဘူး သူငယ်ချင်း။ ( Ummm.. )
လူဆိုတာ နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်ရှာတာ ကိုယ်ရတာပဲ။ ကိုယ်မရှာခဲ့တဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ရမလာတာ ၀မ်းနည်းစရာ မဟုတ်ပါဘူး။ သေသေချာချာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ ဘ၀တလျှောက်လုံးမှာ ကိုယ် ဘာတွေအတွက် အချိန်ပေးခဲ့ပြီး ဘာတွေ တကယ် ရှာဖွေခဲ့လဲဆိုတာ။ ( သေချာပြန်စဉ်းစားနေတယ်.. =) )